Wajiga koowaad ee mashruuca ballaarinta dekedda Berbera oo la dhagax dhigay - Halbeeg News
Wajiga koowaad ee mashruuca ballaarinta dekedda Berbera oo la dhagax dhigay
BERBERA (HALBEEG)​ – Madaxwayne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa si rasmi ah maanta xarigga uga jaray wajiga koowaad ee mashruuca lagu ballaarinayo dekedda magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.
Mashruucan oo boqollaal milyan oo doollar ku bixi doonto, waxaa maal gelinaysa shirkadda DP World, qandaraaska lagu dhisayana waxaa qaadatay shirkad kale oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta laguna magacaabo Shafa Al Nahda.
Cabdiraxmaan Saylici oo munaasabadda daahfurka mashruuca ka hadlay, wuxuu ku tilmaamay in uu yahay mid kamid ah himilooyinkii Somaliland ay muddada dheer ku taamaysay oo hirgelinteeda lagu guuleystay.
Munaasabadda furitaanka wajiga koowaad ee mashruuca ballaarinta dekedda Berbera, waxaa sidoo kale ka qayb galay Agaasime Ku Xigeenka DP World Cadnaan Al Cabbaar iyo Maareeyaha Shirkadda Shafa Nahda Cabdiraxmaan Shabax.
Heshiiska ballaarinta dekedda Berbera ayaa bishii March ee sannadkan waxaa si wadajir ah qalinka ugu duugay Somaliland, Shirkadda DP World iyo Dowladda Itoobiya.
Mashruucan oo guud ahaan ay ku bixi doonto lacag dhan $442 milyan, waxay Shirkadda DP World ku leedahay saami dhan 51% iyadoo Somaliland qaadatay 30% halka 19% la siiyey Dowladda Itoobiya.
Maamulka Puntland oo shacabka uga digay dufaanta Luban
Google oo racfaan ka qaadatay ganaax gaaraya $4.9 bilyan oo Midowga Yurub uu ku soo rogay